Waa maxay, sidee loo sameeyay iyo noocyada duufaanka | Saadaasha Shabakadda
Kun jeer hadaanay ahayn milyan jeer waxaad hadalka ku maqli doontaa cimilada duufaan. Waxay la xiriiraan cimilo xumo iyo roobab, laakiin waxaa suuragal ah inaadan si fiican u aqoon waxa uu yahay ama sida loo sameeyo. Duufaantu waa dhacdo saadaasha hawada oo la xiriirta cadaadiska Hawada iyo, sidaa darteed, waa inaad wax yar ka ogaataa hawlgalkeeda si aad u ogaato waxay tahay.
Qormadan waxaan ku soo bandhigi doonnaa waxa ay tahay duufaanku, sida ay u samaysan tahay iyo noocyada kala duwan ee duufaanta jirta.
1 Waa maxay duufaan
3 Sidee loo sameeyay
4 Noocyada foosha
Waa maxay duufaan
Waxa ugu horreeya waa in la ogaado waxa ku saabsan dhacdadan saadaasha hawadu. Dhacdooyinka la xiriira cadaadiska waa kuwa shuruud ku xidha in ay tahay mid dabeylo badan ama roob badan, qabow ama kulul. Markaan la kulanno xaalad cadaadis sarre leh, waxaa la yiraahdaa waxaa jira anticyclone. Anticyclones badanaa waxay laxiriiraan xaaladaha cimilada wanaagsan iyo cimilada wanaagsan. Badanaa dabeyl yar ayaa jirta guud ahaanna waa qorax.
Dhinaca kale, marka cadaadisku hooseeyo, waxaa badanaa la socda duufaan ama duufaan. Xaqiiqda ah in cadaadiska jawiga hoose uu ka hooseeyaa waxay ka dhigan tahay aaggaas inuu leeyahay qiyam ka hooseeya dhammaan hareeraha hareeraha. Khubarada saadaasha hawada waxay ka soo ururiyaan xogta akhriska barometerka xarumaha kaladuwan ee cimilada adduunka. Xogtaan, khariidadaha waxaa lagu samayn karaa halka lagu muujiyo qaybaha leh cadaadis badan ama ka yar.
Duufaannada waxay ka dhacaan aagagga aadka u qabow ee latitude dhexda. Waxay ku samaysmaan dhaqdhaqaaq dusha sare ah laba cuf oo hawo diiran iyo qabow. Astaamahoodu way kala duwan yihiin markay hawaduhu kulmaan. Soo saarida nidaam cadaadis hooseeya oo aan ugu yeerno duufaan wuxuu u qaybsan yahay afar qaybood: hore, qaan gaar, kala-daadasho, iyo kala-daadasho. Caadi ahaan, mar haddii duufaan dhacdo, waxay awood u yeelan kartaa inay socoto celcelis ahaan ilaa toddobo maalmood.
Tani waa sababta marka cimiladu xun timaado oo la dhaho "duufaan baa socota", saadaasha waxaa badanaa la sameeyaa usbuuca oo dhan. Saameyntu waxay bilaabi doontaa in la arko waxyar yar, waxay gaari doontaa heerkeeda qiyaastii bartamaha usbuuca waxayna ku dhamaan doontaa yareynta saameynteeda illaa ay si buuxda u baaba'do.
Aagga cadaadiska hoose wuxuu ku wareegsan yahay dabeylo u dhaqaaqa dhanka saacada dhanka woqooyi iyo saacada dhanka koonfureed. Duufaannada iyo duufaannada labadaba waxaa soo saaray duufaan taas oo aakhirka leh cabirro iyo cawaaqib aad u weyn.
Sidii aan horay u soo sheegnay duufaanku waa macnaha cimilo xumo. Markii duufaan lagu dhawaaqo wararka telefishanka, waxaa la filayaa inay jiri doonto ugu yaraan toddobaad iyadoo cimilo xun jirto oo aan ku yeelan doonno roobab, dabaylo iyo cimilo xumo guud ahaan. Astaamaheeda waxaa ka mid ah daruuro sare. Sababtuna waxa weeye, markay hawadu soo kacdo, way qabowdaa, isu soo ururaysaa oo qoyaan baa keenaysaa. Saamaynta ugu dhakhsaha badan waa roobab culus oo wata dabeyl iyo dabeylaha korontada.
In kastoo dadku aysan aqoon buuxda u lahayn, waxaa jira duufaano badan oo soo saari kara kuleyl saa'id ah. Samaysashada duufaannadaas waxay la xiriiraan wejiyada cirifyada ee Atlantic.
Waxaan falanqeyn doonaa talaabo talaabo ah waxa ku dhacaya jawiga duufaantu inay dhacdo. Badanaa wuu bilaabmaa marka hawo qabow oo qalalan oo ka socota cirifka hore ay u dhaqaaqdo dhinaca koonfureed. Isla mar ahaantaana ay taasi dhacdo, cimilo hawadeed kuleyl ah, oo inta badan diiran oo qoyan, ayaa u dhaqaaqda woqooyiga. Tani waxay ahayd wajigii koowaad ee duufaanku bilaabmayo inuu dhaco.
Wejiga xiga waa ruxitaanka jira marka labada hawo kulmaan. Bixitaankani aad ayuu usii xoogeysanayaa cirka hawaduna waxay u jeeddaa dhinaca koonfureed. Labada hawo ayaa wada hore, laakiin kan koonfur taga wuxuu wataa wejiga hore qabow kan waqooyiga ayana wuxuu wataa kan diiran.
Waxay ku jirtaa xaaladahaas roobka ugu daran ee ka da'a wejiga hore ee qabow. Wejiga ugu dambeeya ee sameysashada duufaanta ayaa ah in wejiga qabow uu gabi ahaanba qaboojiyo midka kulul, taasoo ka dhigeysa inuu yar yahay cabirkiisa. Intaas waxaa sii dheer, waxay gebi ahaanba ka go'daa hawada inteeda kale ee kuleylka ah waxayna baabi'isaa dhammaan qoyaanka ay keentay. Adoo qaadaya qoyaanka, waxay kaloo ku shaqeysaa tamartaada.
Waa xilligaas meesha ay ku xirmayso qaababka hore iyo halka ay duufaanta duufaanku ka dhacdo. Duufaantan waxay u dhiman doontaa sida jihada hore ee iskeed isu taagto. Wejiga ugu dambeeya ee duufaanka ayaa isla ku dhammaanaya noocyada daruuraha kasoo muuqanaya wejiga diiran.
Waxaa jira dhowr nooc oo duufaanno ah oo loo yaqaan:
Thermals. Waa kuwa kor u kaca hawadu dhacdo markay heer kulku aad uga badan tahay tan deegaanka. Marka waxay dhacdaa kuleylka xad-dhaafka ah markay soo baxaan. Badanaa, uumi bax aad u daran ayaa dhaca, waxaana ku xiga uumiga. Natiijada noocan ah duufaannada, roobab aad u tiro badan ayaa dhaca.
Dhaqdhaqaaqa Duufaanta noocan ah waxay ka timaaddaa cufnaanta hawada ee ku wajahan tropopause (link). Dhaqdhaqaaqan waxaa sabab u ah cadaadis ay qabaan hawo qabow oo dhaqaaqa. Duufaannada nuucaan ah waxaa lagu sifeeyay inay yihiin ifafaaleyaal subpolar ah waana niyad jab barometric ah oo ku yaal bartamaha meelaha cadaadiska sarreeya. Matalaaddeeda garaafka ah waxay u egtahay dooxada.
Saameynta duufaanta aan leenahay dabeylo gaaraya 120 kiilomitir saacadiiba. Waxay ku keentaa dhul go'id waddooyinka waxayna ka dhigtaa dariiqa isgaarsiinta mid adag oo dabeylo iyo roobab wata. Cirka daruuraha leh ayaa sidoo kale aad u tiro badan, waxa ugu caansan ayaa ah in duufaanta ay la socoto dhibco heer kulka ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkaan aad ku ogaan karto waxa ay tahay duufaanku iyo sida ay u sameysantahay si aan looga tagin adigoon waxba ogeyn marka aad akhrinaysid wararka jawiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaan